Xalka daawada oksijiinta ee loo yaqaan 'AngelBiss oxygen' oo ku saabsan Codsiga Biyaha waa isha ugu aaminka badan uguna kalsoonida badan ee loo isticmaali karo biyo-dhaqashada waxayna beddeli kartaa il kasta oo kale oo laga helo oxygen-ka. wuxuu yareeyaa tirada bakteeriyada, isagoo markaa hagaajinaya wax soo saarka kalluunka iyo hagaajinta caafimaadka guud ee kalluunka. Waxyaabaha oksijiinku ku badan yahay waxay muhiim u yihiin soosaarida dhirta iyo kalluunka.
Xalka isku-darka 'oxygenBb oxygen' ee matoor-dhaliyaha ozone. Isku-darka loo yaqaan 'AngelBiss oxygen concentrator' wuxuu u beddeli karaa oksijiin ozone iyadoo la siinayo oksijiin koronto-dhaliye. Ozone ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa nadiifinta, ka saarista urta, ilaalinta cuntada, iyo nadiifinta biyaha.
Oxygen Generator Adeegsiga Warshadaha
Xalalka wax lagu ururiyo ee loo yaqaan 'AngelBiss oxygen' ee Codsiga Warshadaha ee dhinacyada kala duwan.
AUTO CPAP / BIPAP waa mid jilicsan, oo si fudud loo isticmaali karo loona dejin karo loona kala qaadi karo.wuxuu sidoo kale u ogolaanayaa isdhaafsiga isticmaalka.Waxay hanan kartaa shaandhada, qoyaanka iyo shaqada kululaynta sanka si weyn si loo yareeyo oof-wareenka la xiriira hawo-mareenka. Awoodda qufaca, rajada iyo hadalka, iyo hagaajinta raaxada Waa waxtar leh oo ammaan ah, waxayna sidoo kale ka fogaan doontaa dhibaatooyinka tracheotomy ama faleebada tracheal.